Saddex kamid ah Xulka Qaranka Masar oo ka baaqan doona Ciyaarta Xulalka Angola iyo Gabon - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Saddex kamid ah Xulka Qaranka Masar oo ka baaqan doona Ciyaarta Xulalka...
Ilaa haatan saddex Ciyaartooy oo Masaari ah ayaa la xaqiijiyey inaysan ka mid noqon doonin ciyaarta ay Xulkooda Qaranka la yeelan doonaan dhigooda Angola iyo Gabon bilowga bisha soo socota.
Laacibkii hore ee Xulka K/Cagta Masar, Axmed Xasan Miido ayaa sheegay inay Kooxda Liverpool FC diiday inay Laacibka Maxamed Saalax u oggolaadaan inuu Xulka Qarankiisa kala qeyb galo Labada ciyaar ee ku soo wajahan ee Qeybta ka Isreebreebka loogu gudbi doono Tartanka K/Cagta ee Koobka Adduunka ee dalka Qatar lagu qaban doono sanadka soo socda ee 2022-ka.
Sidoo kale, Laacibka Reer Masar ee Maxamed Elneny oo u ciyaara Kooxda Arsenal iyo Axmed Xijaas oo Daafaca uga ciyaara Kooxda Al-Itaxaad Sacuudiga ayaa iyagana ka mid noqon doonin Ciyaartoyda Xulka K/Cagta Masar ee ciyaarta Xulalka Angola iyo Gabon la yeelan doonaan.
Xulka K/Cagta Masar waxay dhigooda Angola iyo Gabon la ciyaari doonaan bisha soo socota ee September 2-da iyo 5-da, sida ku cad Jadwalka Tartankaasi.
Previous articleWeerar dad lagu dilay oo ka dhacay duleedka Beledweyne
Next articleErdogan oo sheegay inay Kooxda Daacish tahay khatar ku soo fool leh Caalamka